तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्, “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ” | suryakhabar.com
सरकारले बाढीपीडित समक्ष राहत पुर्‍याउन सकेन- नेता महतो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा पन्ध्र लाख घुससहित तीन इञ्जिनीयर पक्राउ
काम भन्दा बढी सस्तो प्रचारबाजीमा लाग्नाले सरकार नागरिकको नजरबाट गिर्योः नेता सिंह
लुकेर जनतालाई आतङ्कित पार्ने ‘जङ्गली राज’ हाम्रो सरकारलाई चल्दैनः मन्त्री बास्कोटा
देशको अस्मिता र राष्ट्रियतामाथी खेलवाड नगर्न ओली सरकारलाई डा कोईरालाको चेतावनी
Home पु.समाचार समाचार तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्, “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ”
तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्, “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ”
on: July 18, 2017 In: समाचारTags: "चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ", तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्No Comments
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकामा खाजा, नास्ता, खाना, पेय पदार्थ, फलफूल आदी व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यहाँका रेष्टुरेन्ट, होटल, खाजाघर, क्यान्टीन देखी लिएर ठेला व्यवसायबाट समेत वयावशाय संचालन गरी जिबिकोपार्जन गर्नेहरुको कमी छैन ।
मःमः, चाउमिन, समोसा, सेल, आलु परौठा, चना चिउरा, भूटन चिउरा, खीर, चाउचाउ, सेण्डविच, पीजा, बर्गर, स्प्रिङरोल, मासु चिउरा लगायतका खाजा सामान्य पसलहरुदेखि ठूला ठूला होटलहरुसम्ममा पाईन्छ ।
यसै बिषयमा सुर्यखबर डट्कम्का प्रतिनिधि कृष्ण आचार्य र सागर कट्वालले काठमाण्डौमा उक्त ब्यावशाय गरेर बस्नुभएका ब्यावशायीहरु तथा खाजाका पारखीहरुसंग कुराकानी गरेर एउटा सानो रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
कुराकानीमा सबै खाजाहरु मध्ये बफ मःम र चाउमिन सबै भन्दा बढि बिक्री हुने व्यावशायीहरु बताउछन् । त्यसैले नै होला मःम र चाउमिन साना–साना खाजा घर, ठेला देखी लिएर ठुला–ठुला फार्एभ स्टार होटल तथा रेष्टुरेन्टमा समेत पाइने गर्दछ । भन्छन् नेपालीले जति नै नियालेर मेनु पल्टाइ–पल्टाइ हेरे पनि अन्त्यमा मगाउने मःम, चाउमिन नै हो । अहिलेको गर्मीले गर्दा चटपटे तथा पानिपूरीले पनि राम्रो बजार लिएको छ । गर्मीमा सबैलाई, विषेश गरी भर्खरका यूवतिहरुलाई चटपटे, पानिपूरी असाध्यै मनपर्ने गरेकोले ठेला तथा हाते पसलेहरुले राम्रो व्यपार गर्ने गरेका छन् ।
ठेलाले कहिले काही दैनिक रुपमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट बराबरको ब्यपार गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ । घर भाडा, सरकारी कर तथा अन्य खर्चहरु नगर्नुपर्ने कारणले र सानो लगानीमा व्यवसाय सुरु गर्न सकिने कारणले यो व्यवसायको राम्रो आम्दानी छ । गर्मीले गर्दा फलफूल पनि असाध्यै बिक्ने गरेको छ । दिनमा १० हजार सम्मको नाफा आउने पसलेको नयां बानेश्वरमा फलफल पसल राखेको व्यावशायी संजीत खड्काको भनाइ छ ।
काठमाण्डौ नेपालको राजधानी र संसारका मानिसहरुको भीड लाग्ने शहर हो । बिद्यार्थि, वकील, प्राध्यापक, उद्योगी, ब्यापारी, पेशाकर्मी, शिक्षक, डाक्टर ईन्जीनियरमात्र नभएर कर्पोरेट हाउस र प्राईभेट ब्यावशायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले दिउसोको समयमा खाजा नखाई नहुने हुनाले आफ्नो रुची अनुसार खाजा खान्छन् ।
राम्रो आम्दानी हुनेहरुले राम्रा रेस्टुरेण्टमा खाजा खाएपनि धेरैजसो मध्यम बर्गीयको बसोबास भएको काठमाण्डौमा एकदा थोरै रकमले सस्तो, स्वस्थ्य र अघाउने खाजा खोज्ने गरेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीले चिकेन मःम, भूटन चिउरा, आलु चना चिउरा, खीर चाउमिन लगायतका सामान्य खाजा आफ्नै कार्यालयमा भएको क्यान्टिनमा खाने गरेको बताउछन् भने विद्यार्थि र शिक्षक पनि आफ्नै स्कुल तथा कलेजमा भएको क्यान्टिनमा खाजा खान्छन् ।
केटिह भने साँझपख पानीपुरी र चटपटे खाने ठेला अगाडी भीड लागेको देखिन्थ्यो, त्यस भीडमा हामीले रजनी श्रेष्ठ भन्ने १८ । २० बर्षकी केटीलाई सोध्दा उनले पानीपुरी र चट्पटे आफूलाई साह्रै मन पर्ने बताईन् ।
अनि मःम र मध्यम खाल्को मात्र होईन अन्नपूर्ण होटलमा हामीले सोध्दा जता मेनु पल्टाएपनि मःम र चाउमिन बाहेक खाजा नभेटिने उनीहरुले बताए । मध्यम बर्गदेखि आर्थिक रुपमा माथिल्ले र तल्लो बर्ग सम्म मःम र चाउमिन ज्यादै लोकप्रीय भएको छ । विद्याथिीहरुले पनि बढी बफ मःम मन पराएको बताए । केटीहरुले बढी आफूहरु भेज मःममा आकर्शित हुने रुची देखाए भने कर्मचारी लागयतका पेशाकर्मी मःम चाउमिन खाँदा भेज वा चिकनमा ध्यान जाने तर्क प्रश्तुत गरेका छन् ।
सरसफाईको बारेमा कुरा गर्दा बाहिर खाजा वा खाना खाँदा विश्वास गरिहाल्न नसकिने भएपनि आफूले अलि राम्रो ठांउलाई रेगुलर बनाउनुपर्ने उनिहरुको विचार छ । मःम प्रति प्लेट ५० रुपैंयादेखि ७०० रुपैंयासम्मको भेटियो । ठूला होटलहरुमा करसहित तिनुपर्ने हुंदा महंगो पर्ने भेटियो । चाउमिनको रेट मःम भन्दा केहि सस्तो छ । मःम र चाउमिन दुबै चाईनिज खाजा हुन् ।
सबैले खाजा खानैपर्ने बाध्यता भएपछि सामान्य खाजा बेचेर पनि राम्रो आम्दानी गरेको ब्यावशायीहरुको तर्क छ । पसल घरैपिच्छे भएकोले उपभोक्तालाई समेत छानि छानि खाजा खाने ठाँउ भएको देख्न सकिन्छ । काठमाण्डौमा धुलो, धुंवाँ र फोहोरले भने खाजालाई त्यती खान योग्य बनाउन नसकेको देखिएकाले डाक्टरहरुले खाना तताएरमात्र खान सर्बसाधारणलाई बेला बेला आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत बेला बेला सूचना निकाल्ने गरेको छ ।
Tags: "चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ"तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्
नेपाल प्रहरीभित्रको एउटा कामले देखायो प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार सफल हुने संकेत !
नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइन टेलिफोनको यसरी हटायो
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा व्यापार सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
वर्षाको कारण विद्यालयहरु पुरिएः सयौँ बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा
‘तारणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम’ प्रदेशकै गौरवः मुख्यमन्त्री राई
थपलियालाई ‘जसुदा स्मृति प्रतिभा पुरस्कार’
बस्ती मुनिको जमीन कटान भएपछि कालीगण्डकी कोरिडोरको पाँच घर जोखिममा
सामुदायिक भवन रातु नदीको बाढीले बगाएपछि दलितबस्ती आश्रयबिहीन
बाढीपीडितको उपचारका लागि डा केसी रौतहटमा, भन्छन्, ‘स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्नुपर्यो’
३ श्रावण २०७४, मंगलवार